Xiligii Madaxweyne Maxamed Siyaad ayaa waxaa la afduubay diyaarad rakaabkeedu uu ka mid ahaa diblomaasi Soomaaliyeed oo lahaa hal-heyska ah “SHARAF”. Markii lagu dhawaaqay in diyaaradi You can buy your viagra only for $0.45 right now! Take advantage of this premium offer! uu saarnaa la afduubay, ayaa diblomaasigii yiri, “SHARAF.” Markastoo afduubuhu war sheego, diblomaasigu wuxuu lahaa, “SHARAF.” Cabaar ka dib ayaa afduubihi Loo sheegay inay diyaaradu ku degidoonto Addis-Ababa. Kadibna diblomaasigii wuxuu yiri, “NAGAMA KIIN QABATO.”
Hadda iyo dan, guddoonka labada aqal ee barlamaanka waxaa laga sugayaa inuu si degdeg leh u dhaqan geliyo “Maxkamada dastuurka,” qabyana tiro dastuurka dalka. Komeerka dowladda ma suurto gelayo haddii aan la dhammeystirin sharuucda ka hortagilahaa-luushka iyo musuq-maasuq. Maxaakamadaha dalka waxaa laga sugayaa fulinta sharuucda hanti-dhoorka iyo anshax wanaaga si loo lala dagaalamo musuq-maasuqa iyo laa-luuushka. Dalna ma horumaro inta musuq-maasuq iyo laaluush ay caado u yihiin.
Mareykanka oo xalay gantaalo ku garaacay saldhigga cirka Siiriya